कक्षा १२ को नतिजा कहिले आउँछ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकाल्यो अत्यन्तै जरुरी सूचना ! – Wow Sansar
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा जतिसक्यो छिटो परीक्षार्थीहरुको प्राप्ताङ्क कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘आफ्नो विद्यालयका ५०-१०० जना विद्यार्थीको पनि सिरियल नम्बरअनुसार नपठाइदिएर जिकज्याक गरेर पठाइदिएका छन् । माथिको तल, तलको माथि छ, खोज्दै इन्ट्री गर्दा त साह्रै गाह्रो भाछ ।’
‘सिम्बोल नम्बर सिरियली भएको भए फटाफट इन्ट्री गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यसो नभएकाले दिनमै ४० हजार इन्ट्री गर्नेहरुले ५ हजार पनि इन्ट्री गर्न सकिरहेका छैनन्,’ प्रा.डा. पौडेलले भने, ‘त्यसैले कहिले सकिन्छ भनेर भन्नै नसकिने भयो । तर सकेसम्म छिटो काम सक्ने कोसिस गरिरहेका छौं ।’ यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले १५ पुसभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।
केन्द्रमा आएको प्राप्तांकमा कक्षा ११ को प्राप्तांक, आन्तरिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको अंकसमेत जोडेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । अनलाईन खबरबाट साभार
Prevशाहरुख खानको जिम्मामा बलिउडले किन्यो नेपाली चलचित्र ‘प्रेम गीत-३’